Izinjini Zokuzenzela kanye Nosesho | Martech Zone
Enye indlela yokwenza ngcono ukugcinwa kwamakhasimende nokwaneliseka kwamakhasimende ukukhiqiza okuqukethwe okusiza amakhasimende ukuzisiza. Akukhona nje kuphela ukuthi kukhona ukuthuthuka ekwanelisekeni kwamakhasimende, kukhona ukonga okuqondile okuhlobene namakhasimende angabophi imigqa yezinsizakalo zamakhasimende akho. Ukushicilela isisekelo sakho solwazi, imibuzo ebuzwa njalo, amazwibela nezibonelo lapho izinjini zokusesha zingazithola khona kwenza lokhu kwenzeke - kungazibeki ngemuva kokungena ngemvume ngokwesaba izimbangi ezizitholayo.
Izifundo zakamuva zisitshela ukuthi amakhasimende amaningi andayo akhetha ukuzenzela insizakalo kunokuxhumana ne-ejenti yokusekela; futhi njengoba i-infographic engezansi ibonisa, ama-91% athe azosebenzisa isisekelo solwazi uma ehlangabezana nezidingo zawo. Lezi yizindaba ezinhle zamabhizinisi; ukuzisebenzela kuyindlela esheshayo futhi engabizi kakhulu yokuxhaswa kwamakhasimende. Ukuthuthukiswa kwe-Infographic kweZendesk ku Sesha Ukuzisebenzisela Okwengeziwe Okukhaliphile
Tags: ukwaneliseka kwamakhasimendeInsizakalo yekhasimendeImibuzo Evame Ukubuzwaezokuzisiza
Nov 12, 2012 ngo-3: 23 PM
Lezi izinto ezimnandi! Okunye ukusabela okusheshayo okuvela kumuntu owenza ukuphathwa kolwazi nokuzisebenzisela ukuziphilisa:
1. Kuyahlekisa ukuthi i-Oracle icashunwe esigabeni esiphathelene ne-SEO futhi yabelana ngokuqukethwe kwakho ngezinjini zokusesha zewebhu, njengoba ziyisibonelo esivelele senkampani ye-B2B engabelani ngokuqukethwe kwesisekelo solwazi nge-Google et al. Kungcono noma kubi kakhulu, bakhiya okuqukethwe kwabo kwe-KB ngemuva kokungena kwabo ngemvume
2. Imininingwane yami yehluke kakhulu, yehluke kakhulu - iphansi kakhulu - kune- "40% ezoshayela isikhungo soxhumana nabo ngemuva kokuzisebenza." Uma ucabanga ngesipiliyoni sakho se-B2C ku-Amazon, Microsoft, njll., Uyabona ukuthi lokhu kungama-oda wobukhulu kakhulu. Kepha nasezindaweni ze-B2B, ivolumu kuwebhusayithi ingu-10x - 30x ivolumu esikhungweni sokusekela, noma ngaphezulu.
3. Ngicabanga ukuthi uGartner unephutha ngamanxusa abonakalayo. (Amathuba angama-70%) 🙂
Nov 12, 2012 ngo-4: 17 PM
Ngemuva kokuthi uPenguin nePanda bavuselele okuqukethwe yinkosi. Ukushicilela isisekelo sakho solwazi kuzothuthukisa i-SEO yakho